Isalathiso sombala ophakamileyo we-1.Ukuhanjiswa kombala kulungile, ukukhanya kuzinzile, kwaye owona mbala uyinyani. Ubushushu bombala womthombo wokukhanya kwe-LED kukukhetha, onokuhlangabezana neemfuno zemo ezahlukeneyo
2.Ukufiphaza isantya kathathu: Ukukhanya okuqaqambileyo kwegiya esezantsi ngama-5500ml, ukukhanya kokukhanya kwezixhobo eziphezulu kunokufikelela kwi-11000ml; Unokuhlengahlengisa ukukhanya ngokuhambelana neemfuno zakho.Ukusetyenziswa komthombo wokukhanya kwe-LED ongenisiweyo, hayi ukukhanya okuhle kuphela ukusebenza kakuhle, kwaye kwandiswe kakhulu ubomi benkonzo yokukhanya kunye nezibane.
Itekhnoloji yokusasaza ubushushu, ukhuseleko oluphezulu: Uyilo olwahlukileyo lokuntywila kobushushu, oludityaniswe ngokugqibeleleyo kunye nebhokisi yombane, luqhuba ngokufanelekileyo kwaye lusasaza ubushushu, ngaloo ndlela kunciphisa ubushushu kumzimba wesibane, okhuselekileyo.
Ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo: Luhlaza kunye nokusingqongileyo, akukho kungcoliseka kwendalo, uyilo lomthombo obandayo, akukho radiation ishushu, akukho monakalo emehlweni naseluswini. Ayinazinto zongcoliseko ezinje ngelothe kunye nemekyuri, eqonda uluhlaza okwenyani.
Ukukhanya okuphezulu kwe-bay luhlobo lokukhanya okuphezulu kwangaphakathi kokukhanyisa kwe-LED, enoluhlu olubanzi lwezicelo kwezorhwebo nakwimizi-mveliso, kwaye ineendlela ezahlukeneyo zokufaka. Ingafakwa ngeesilingi ezixhonyiweyo, iipali ezigobileyo, iipali ezimileyo, iisilingi, izibiyeli ezimile okwe-U, njl.njl zilungele indawo enkulu, ethe nkqo okanye ephantse indawo yokusebenza. Ke ngoko, iyahlangabezana neemfuno zokukhanyisa kurhwebo, iifektri, iijimi, iivenkile ezinkulu, amabala emidlalo, iindawo zentengiso, iindibano zocweyo, iindawo zeshishini, iigaraji, njl.
Egqithileyo Izibane eziSebenzayo eziPhathekayo zezibane ze-LED
Okulandelayo: X Series Floodlight Nge woluvo Microwave
Izibane eziPhezulu eziPhezulu eziPhakamileyo
Izibane eziPhakamileyo zeBay
Ufo Led High Bay Ukukhanya